၂။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ရေးသားခြင်း - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> Chapters > အခန်း ၈။ > ၂။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ရေးသားခြင်း
မှတ်သားရန် – ဤသည်မှာ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု ရေးသားခြင်းအတွက် ပြည့်စုံသည့် လမ်းညွှန်မှု မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက် စကားအသုံးအနှုန်းကို မည်သို့ သုံးစွဲသင့်သည်နှင့် သပ်ရပ်ကောင်းမွန်သည့် ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုကို မည်သို့ တည်ဆောက်သင့်သည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံဥာဏ်ကောင်း အချို့ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု သတင်းဆောင်းပါး အားလုံးသည် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အသံသွင်းယူထားသည့် နှုတ်ပြောစကား များနှင့်အတူ ပါရှိကြသည်။ တူညီသော ဓာတ်ပုံနှင့် နှုတ်ပြောအကိုးအကားများသည် ၎င်း၏ ဆက်စပ် အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ သတင်းဆောင်းပါး များစွာကို ပြောပြနိုင်ကြသည်။ ထုတ်လွှင့်အစီရင်ခံခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်၏ သတင်းဆောင်းပါးကို ပရိသတ်များ၏ အပြည့်အဝ နားလည်မှုအား သေချာစေရန် ဖြစ်သည်။
ပညာသားပါသော စာသားတစ်ခုသည် သတင်းတင်ပြမှု တစ်ခုတွင် အလွန်သမားရိုးကျဆန်သော ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် အင်မတန် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော နှုတ်ပြောစကား ဖြစ်နေလျှင်ပင် ပရိသတ်များက တွေ့ရှိနိုင်စေသည်။ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင် အသံသွင်းယူထားသော နှုတ်ပြောစကားများကို ခြုံငုံ၍ ရေးသားထားသည့် ဇာတ်ညွှန်းက ရှေ့နောက်အဆက်အစပ်ကို ခွန်အားအရှိဆုံး ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော် ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင်မူ သတင်းဆောင်းပါး အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ရုပ်ပုံများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကောင်းမွန်သည့် စာသားတစ်ခုက ငြီးငွေ့စရာကောင်းသော ရုပ်ပုံများနှင့် နှုတ်ပြောစကားများအတွက် အမြဲတမ်း ဖာထေးမပေးနိုင်ခြင်းမှာ စာဖတ်သူများက လက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခြေအနေနှစ်ရပ်လုံးတွင် သင်၏ သတင်းဆောင်းပါးကို ရုပ်ပုံများ သို့မဟုတ် အသံသွင်းထားသည့် နှုတ်ပြောစကားများအား ခြုံငုံ၍ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤသည်ကို “သောတအတွက် ရေးသားခြင်း” သို့မဟုတ် “ရုပ်ပုံများအား ရေးသားခြင်း” ဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။
သင်၏ ကင်မရာတွင် အမိအရ ရိုက်ကူးထားသည့် မြေပြင် သတင်းပေးပို့မှုဖြင့် စတင်ပါ။ ထို့နောက် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှင့် အစီရင်ခံမှုနှင့် အကူးအပြောင်းများတွင် ရွေးချယ်ထားသည့် စကားလုံးများကို ဂရုစိုက်၍ အသုံးပြုရမည်မှာ
(၁.) သတင်းဆောင်းပါး၏ အရေးအကြီးဆုံး ရှုထောင့်ကို မီးမောင်းထိုးပြပါ။
(၂.) ရှုထောင့်အချို့ကိုသာ ထင်ရှားစေသည့် ပုံရိပ်များနှင့် နှုတ်ပြောစကားများ နေရာတွင် ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းညှိပေးပါ။
(၃.) ပရိသတ်က အလေးဂရုပြုစေရန် သင်အလိုရှိသည့် အရာများကို ဇောင်းပေး ရွေးချယ်ပါ။
(၄.) မတူကွဲပြားသည့် ရုပ်ပုံများနှင့် နှုတ်ပြောစကားများကို ချိတ်ဆက်၍ အချိန်အခါအားဖြင့် ၎င်းတို့ မည်သို့ ရွေ့လျားသည်ကို ရှင်းလင်းပါ။
(၅.) ရုပ်ပုံများနှင့် နှုတ်ပြောစကားများကို အဆက်အစပ် ရှိပါစေ။
(၆.) ရုပ်ပုံများနှင့် နှုတ်ပြောစကားများပေါ်တွင် ထပ်ဆောင်း အဓိပ္ပာယ် သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူချက် ဖြည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် “အလှည့်အပြောင်း” တစ်ခု ဖန်တီးပါ။ (သို့သော် သတင်းအချက်အလက်ကို ပုံမပျက်ပါစေနှင့် သို့မဟုတ် ရှုထောင့်အား မပျက်စီးပါစေနှင့်။)
သတင်းပေးပို့သူသည် အဓိက ဦးစားပေး သုံးခုကို ကြိုးပမ်းအားထုတ် နိုင်/သင့် သည်။ သို့သော် ထိုသို့ဆိုရာတွင် သတင်းနှင့် သတင်းဖတ်ရှုနားဆင်သူတို့အကြား အရံအတားတစ်ရပ်သဖွယ်၊ စိစစ်ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုသဖွယ် တစ်ချိန်လုံးဝင်ရာက်စွက်ဖက်နေရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သင့်သတင်းနှင့် ဆီလျော်မှုရှိသည့် မူရင်းပြောဆိုမှုကောက်နုတ်ချက်ကို ရရှိနိုင်ပါက ယင်းကို သတင်းသမား၏ ပြန်လည်ရေးသား ပြောဆိုချက်ထက် ဦးစားပေးအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနှစ်မျိုးအကြား ကွာခြားချက်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပရိသတ်က နားမလည်ခဲ့လျှင် ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်း ပြန်ကျော့နိုင်သည်။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု တစ်ခုသည် ပရိသတ်သည် ဖြတ်သန်းကျော်လွှားရန် တစ်ချက်ကောင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပရိသတ်များသည် အစုံလိုက် တစ်ခုလုံး၏ သဘာဝက မည်သည်ကြောင့် အရေးကြီးရသည်ဆိုသော အသေးစိတ် မှတ်ဥာဏ်ထက် သဘောထားထင်မြင်ချက် တစ်ခုကိုသာ ပြန်ကောက်ရနိုင်သည်။
အမှားများသည် သိသာထင်ရှားပြီး စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကျန်ရှိနေသည်။ ပရိသတ်သည် အမှားများကို ပထမအကြိမ် သတိပြုမိသည် သို့မဟုတ် ဘယ်တော့မှ သတိမပြုမိပါ။
စာမျက်နှာ ပတ်ပတ်လည်တွင် ဦးတည်ရာ ရှာဖွေခြင်းကို ကူညီရန် သတင်းခေါင်းစီးများ၊ ပုံစာများနှင့် စာပိုဒ်များကဲ့သို့ ရှင်းလင်းသည့် ဖော်ညွှန်းမှုများ ရှိကြသည်။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း ပရိသတ်အသစ်များ အတွက် မည်သို့ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို တွက်ချက်ရန် ခက်ခဲသည်။
စာဖတ်သူသည် သွားရောက်ရန်နှင့် အခြား တစ်စုံတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဖတ်ရှုခြင်းကို ရပ်နား ထားခဲ့နိုင်သည်။ ပြန်လာချိန်တွင် ရပ်နားထားသည့် နေရာမှ တစ်စုံတစ်ရာ ကျန်ရစ်ခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည် ကောက်ယူ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုသူသည် အစိတ်အပိုင်းကို ကူးယူထားခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်မှသာလျှင် သွားရောက်ရန်နှင့် အခြား တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုကို ထားခဲ့နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံများနှင့် မာလ်တီမီဒီယာ အကြောင်းအရာ များသည် သတင်းဆောင်းပါး၏ လက်ခံယုံကြည် နိုင်စွမ်းတွင် ပိုမို ပေါင်းထည့်ပေးရလေ့ ရှိသည်။ အွန်လိုင်းထုတ်လုပ်မှုများတွင် ပရိသတ်များ၏ ယုံကြည်မှုအား ပိုမိုလေးနက်လာစေရန်အတွက် ဤအားသာချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု သတင်းများတွင် ပရိသတ်ကို ဆိုလိုရင်း အာဘော်အတွက် အထောက်အထားများ ပိုမိုပေးထားသည်။ (ဥပမာ အမြင့်သံ၊ ဓာတ်ပုံများ) သည် ပိုမို၍ လက်ခံယုံကြည်နိုင်စေသည်။ (“ဒါ အမှန်ပဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ဒါကို တီဗီမှာ ကြည့်ခဲ့ရတယ်)။ တူညီသည့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအရ ၎င်းသည် အမှန်တရားကိုလည်း ပိုမိုအင်အားကောင်းစွာ ပုံပျက်စေနိုင်သည်။
ရေးသားထားသည့် သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်သည် ဖတ်ရှုရန် ပိုမိုကြာမြင့်သော်လည်း စာဖတ်သူအဖို့ ပိုမို၍ အသေးစိတ်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကို ရရှိနိုင်သည်။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု သတင်းသည် အဆင့်မြင့် သိရှိနားလည်မှု မလိုအပ်သော်လည်း အစုံလိုက် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားပြောင်းလဲသွားခြင်းကို သိရှိနားလည်နိုင်စေရန် ကောင်းမွန်သည့် အထွေထွေ ဗဟုသုတ လိုအပ်သည်။
ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု သတင်းသည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ထုတ်လွှင့်သည့် အသံဖိုင်မှလွဲ၍ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ တည်ရှိသည်။ သတင်းစာကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ရန် ထိတွေ့နိုင်သော “အရာဝတ္ထု” မရှိပါ။
အကြောင်းပြချက်များ အားလုံးအတွက် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု ကြားခံ၏ သဘာ၀နှင့် ပရိသတ်၏ သတင်း စားသုံးမှုတို့တွင် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခြင်းသည် ပုံနှိပ်မီဒီယာတွင် လုပ်ကိုင်ရခြင်းထက် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော ဘာသာစကားနှင့်ဆိုင်သည့် ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ သို့သော် ကြားခံနယ်ကို အလေးဂရုမပြုပါက သင်သည် အရေးပါသည့် ဖြစ်ရပ်မှန် အချက်အလက်ပမာဏကို ရရှိရန် ကန့်သတ်ထားသည့် အချိန်နှင့် နေရာတို့ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရမည် ဖြစ်သည်။ သင်၏ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားရန်အတွက် အချက်အလက် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးစိတ်သန်း တစ်ခုကို ရှာဖွေ၍ သင်၏ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု အစုံလိုက်အား စတင်ရန် အသုံးပြုပါ။